Tany tsy fahita firy: inona ireo, toetra, fampiasa ary manan-danja | Green Renewable
Rehefa mandinika ireo singa ao amin'ny latabatra ara-potoana isika dia maro amin'izy ireo no mijanona eto ambany ary fantatra amin'ny anarana hoe tany tsy fahita firy. Hita eo amin'ny farany ambanin'ny latabatra misy elanelam-potoana io ary raha tsy misy azy ireo dia tsy hitovy amin'ny fiainantsika ny fiainantsika. Noho ireo tany tsy fahita firy ireo dia azo amboarina ny ankamaroan'ny fitaovana avo lenta toy ny finday, solo-saina sns.
Noho izany dia hanokana ity lahatsoratra ity izahay hilaza aminao izay rehetra ilainao ho fantatra momba ny tany tsy fahita sy ny toetrany.
1 Inona ireo tany tsy fahita firy
3 Fanasokajiana an-tany tsy fahita firy
4 Inona ireo lanthanides
Inona ireo tany tsy fahita firy
Araka ny efa noresahintsika, ireto dia metaly izay tsy dia fahita firy araka ny tondroin'ilay anarana, saingy sarotra alaina. Ary izany dia amin'ny ankapobeny aza miangona amin'ny mineraly. Raha atambatra miaraka amin'ny fangatahana amin'ny fampiharana teknolojia avo lenta ity metaly metaly ity dia misy ny fahasarotana ara-toekarena sy ara-politika isan-karazany izay manintona ny tany tsy fahita firy.
Izy io dia andiana singa simika izay hita ao amin'ny crust eto an-tany ary tena ilaina amin'ny teknolojia maro ananantsika ankehitriny. Ohatra, ny ampahany lehibe amin'ny elektronika mpanjifa, solosaina ary tambajotra, fifandraisana, angovo madio, fitsaboana, fanalefahana ny tontolo iainana, fiarovana nasionaly, fitaterana mandroso, ankoatry ny hafa dia mampiasa tany tsy fahita firy.
Ary tena malaza izy ireo misaotra ny toetrany andriamby, luminecent ary electrochemical. Ireo dia fananana tsy manam-paharoa ary ireo singa rehetra ireo dia manampy ny ankamaroan'ny teknolojia hiasa tsy amin'ny fomba mahomby ihany fa amin'ny fihenan'ny lanja ihany koa. Azontsika atao koa ny mampihena ny fandefasana entona sy ny angovo. Amin'izany fomba izany no ahatongavantsika amin'ny teknolojia ankehitriny miaraka amin'ny fahombiazana, fahombiazana, hafainganam-pandeha, faharetana ary fitoniana mafana. Ny vokatra misy ny teknolojia tsy fahita eto an-tany dia manampy amin'ny fitomboan'ny harinkarena manerantany ary mitazona fari-piainana avo lenta ary mamonjy ain'olona mihitsy aza.
Andao hojerentsika ireo tany tsy fahita sy ny mampiavaka azy Fantatsika fa raha ny haben'ny haben'ny tany dia tsy dia fahita firy. Na izany aza, ny toetra mampiavaka azy dia noho ny firafitry ny atomika. Izy ireo dia manana fametrahana elektronika izay mampiavaka azy ireo amin'ny singa hafa ao amin'ny latabatra maharitra. Na dia mizara ny sasany amin'ireo fananana manan-danja aza ny tany tsy fahita firy, ny hafa kosa dia manokana manokana amin'ny singa manokana. Noho ny fitoviana simika dia miseho miaraka amin'ny mineraly sy vatolampy izy ireo ary sarotra ny misaraka. Io no antsoina hoe coherence simika.
Tany tsy fahita firy Nanjary nalaza be izy ireo noho ny fampiasana betsaka azo ampiharina izay nomena azy ireo noho ny fananana simika. Izy ireo dia miavaka amin'ny singa manokana, noho izany ny fanamby amin'ny fahaizana manavaka azy ireo dia tsy maintsy resena.
Misy karazan-tany tsy fahita firy arakaraka ny toetrany simika, ankoatry ny firafitry ny atomika. Ny habe koa dia mampiavaka azy. Ny haben'ny atikan'ny lantanaides dia mihena miaraka amin'ny isan'ny atomika mitombo. Izany dia miteraka tany tsy fahita firy izay maivana kokoa noho ny fisarahana amin'ireo tany tsy fahita firy izay mavesatra kokoa. Ary izy roa dia samy novokarina tamin'ny mineraly samihafa.
Ohatra, raha miresaka lutetium isika dia hitantsika fa azo soloina mora kokoa amin'ny singa hafa ao anaty mineraly izay kely dia kely ireo tranonkala misy. Amin'ny ankapobeny dia mampihomehy sy mitombina tsara ireo fitambaran-tany tsy fahita. Anisan'ireo oksida hitantsika ny sasany azo antoka indrindra. Ny ankamaroan'ny lanthanides dia manana fanjakana tsy mitombina.
Fanasokajiana an-tany tsy fahita firy
Andao hojerentsika hoe inona avy ireo fanasokajiana samihafa izay ampizarana ny tany tsy fahita. Ny voalohany dia ny lanthanôida izay sokajiana ho tany tsy fahita firy. Andao hojerentsika hoe inona izy ireo:
Etsy ankilany dia manana ny tany tsy fahita firy isika izay manaraka ireto:
Ny singa tokana izay tsy hita ao amin'ity lisitra iray manontolo ity dia ny promethium. Fantatsika fa ny isotopan'ny promethium rehetra dia mihetsika radioactive, noho izany dia azo aorina amin'ny réacteur nuklear izy io. Tsy hita voajanahary eto an-tany.
Inona ireo lanthanides
Azo antoka fa rehefa nandinika ny latabatra ara-potoana izay nanome anao te hahafanta-javatra fantatrao momba ny lanthanides ianao. Momba izany singa tena mahazatra ao amin'ny crust eto an-tany ary tena sarotra ny mamoaka azy. Tsy hoe sarotra alaina fotsiny izy ireo, fa amin'ny isa be azo ampiasaina. Mamiratra izy ireo matetika ary miloko volafotsy matetika. Raha vao iharan'ny oxygen, dia manana an'io loko volafotsy io izy ireo. Izy ireo dia miavaka amin'ny fihetsika mihetsika be ary, na dia tsy mipoaka aza izy ireo, dia afaka misavoana haingana izay mahatonga azy ireo mora tohina amin'ny singa hafa.
Sabemos que tsy ny lanthanida rehetra no mitrandraka miaraka amin'ny taha mitovy. Ohatra, ny lutetium sy gadolinium dia azo aseho amin'ny rivotra mandritra ny fotoana maharitra nefa tsy misy loto. Etsy ankilany, manana singa lanthanida hafa isika toy ny lanthanum, neodymium ary europium izay tena mihetsika ary tsy maintsy tehirizina ao anaty menaka mineraly hisorohana ny zavona.
Ny mpikambana rehetra ao amin'ny vondrona lanthanide dia manana endrika milamina tanteraka. Betsaka amin'izy ireo no azo hokapaina mora amin'ny antsy ary tsy mila fitaovana mavesatra entina hitsaboana azy. Ireo zavatra heverina ho tany tsy fahita dia tsy heverina ho toy izany satria sarotra ny mahita. Heverina ho toy izany fotsiny izy ireo nanomboka teo izy ireo dia sarotra alaina amina habetsahana ampy amin'ny endrika madio mba hahafahana manome fahafaham-po ny filan'ny indostria tsirairay avy. Raha tsy afaka ny ho tonga amin'ny habetsany ilaina hampivelarana ny vokatra teknolojia dia tsy hisy ilana azy ireo.
Ireo tany ireo dia manana loza mitatao eo amin'ny tsena amin'ny maha vokatra lehibe azy. Fantatsika fa i Shina dia manana tahiry ambonin'ny tany tsy fahita be indrindra ary manararaotra izany. Izy ireo dia havany betsaka amin'ny vovoky ny tany, fa ny fifantohana azo tsikaritra na tsy dia fahita firy noho ny ankamaroan'ny mineraly hafa. Izany dia mahatonga ny fitrandrahana ho sarobidy kokoa. Ny fangatahana eran-tany tsy fahita firy dia antenaina hitombo noho ny fampiasana fiara, elektronika mpanjifa, jiro mandeha amin'ny angovo ary katalazy.
Manantena aho fa amin'ity fampahalalana ity dia afaka mianatra bebe kokoa momba ny tany tsy fahita sy ny toetrany ianao.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Fanavaozana maintso » Angovo azo havaozina » Tany tsy fahita firy